Heaven Drop Horonam-Boankazo Misy Tantely - Famolavolana
Horonam-Boankazo Misy Tantely
Horonam-Boankazo Misy Tantely Ny Sky Drop dia horonan-kano feno kapoaky ny tantely madio izay ampiasaina amin'ny dite. Ny hevitra dia ny hanambatra sakafo roa izay ampiasaina misaraka sy manamboatra vokatra vaovao iray manontolo. Ireo mpamorona dia nitaona aingam-panahy ny firafitry ny horonam-boninkazo, nampiasa ny endriny ho toy ny boaty ho an'ny tantely izy ireo ary mba hamatsiana ireo horonam-boankazo izay ampiasain'izy ireo amin'ny leafwax mba hitoka-monina sy hanangona ireo amboara. Izy io dia manana tarehimarika ejipsiana naseho teo amin'ny tarehiny ary izany no satria Egyptiana no olona voalohany nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny kanelina ary nampiasa tantely ho toy ny harena! Ity vokatra ity dia mety ho tandindon'ny lanitra ao anaty kaopyo.
Anaran'ny tetikasa : Heaven Drop, Anaran'ny mpamorona : Ladan Zadfar and Mohammad Farshad, Anaran'ny mpanjifa : Creator studio.
Sakafo ara-tsakafo, zava-pisotro ary zavakanto culinary
Horonam-Boankazo Misy Tantely Ladan Zadfar and Mohammad Farshad Heaven Drop